जीवन जलका जन्मदाता : जसको नेपालसँग पनि नजिकको सम्बन्ध छ - Himalayamail.com
अमेरिका। आम नेपालीहरु झाडा पखला र हैजाको शंका लाग्ने बित्तिकै जीवन जलको प्रयोग गर्छन् । आखिर किन झाडा पखला लाग्दा जीवन जल प्रयोग गरिन्छ ? यसको थालनी कसरी भयो ? यसका जन्मदाता को हुन् ? यो विषयमा खासै खोजी भएको छैन ।
आफ्नो सुनौलो युवा जीवन दक्षिण एशिया खासगरी नेपाल, भारत, पाकिस्तान, बंगलादेशमा बिताएका थिए । यसका अतिरिक्त एशियाका अरु मुलुक अफ्रिका र दक्षिण अमेरिकाका धेरै वटा अबिकसित देशमा अशिक्षा र गरिबीले पिल्सिएका जनतालाई झाडा पखला, आँऊ र हैजाबाट बचाउन महत्वपूर्ण योगदान पुर्याएका छन् ।
सन् १९६७ मा हार्डवेयर विश्व विद्यालयको मेडिसिन विभागले उनलाई रिसर्च फेलोको रुपमा बंगलादेश खटाएको थियो । त्यसपछि सरल विधी अर्थात् नुन, चिनी र पानीको समिश्रण गरी जीवन जलको प्रयोग गरी विरामी गाउँलेलाई दिन थाले । त्यसले विरामीहरु पूर्ण रुपमा निको हुन थाले ।
‘स्वास्थ्य क्षेत्र सेवामुलक हो । तत्काल जसको प्रतिफल आउँदैन । काम गरिरहनुपर्छ’ उनी भन्छन्, ‘जीवन जल आम मानिसका लागि उपयोगी छ, जसलाई आम मानिसले झाडा पखला लाग्दा अनिवार्य पिउछन।’